मण्डलीमा उठ्ने समस्याहरूबारे यस्ता अत्याधिक शङ्काले नभरिऔं। मण्डली निर्माण गर्ने क्रममा, गल्तीहरूलाई टार्न सकिन्न, तर समस्याहरू झेल्न पर्दा नअत्तालिओ, बरु शान्त अनि आत्म-नियन्त्रित होऊ। के मैले अघि नै तिमीहरूलाई भनेको होइन र? मकहाँ निरन्तर आइज र प्रार्थना गर अनि म तँलाई मेरो मनसायबारे बताउनेछु। मण्डली मेरो मुटु हो अनि यो मेरो परम उद्देश्य हो, यसैले कसरी यसलाई म मन नपराउन सक्छु? नडराऊ-मण्डलीमा जब यस प्रकारका कुराहरू हुन्छन्, ती सबै मेरा अनुमतिले नै हुन्छन्। खड़ा होऊ अनि मेरो पक्षमा बोल। विश्‍वास गर कि सबै कुरा र परिस्थितिहरूलाई मेरो सिंहासनद्वारा अनुमति दिइन्छ अनि ती थोकहरूमा मेरो मनसाय हुन्छ। यदि तिमीहरू अनुशासन विहीन ढङ्गमा सङ्गति गर्न लागिरहन्छौ भने, समस्या हुनेछ। के तैँले यसका परिणामहरूबारे सोचेको छस्? यस प्रकारको कुरामा नै शैतानले फाइदा लिनेछ। मकहाँ निरन्तर आइराख्। म सरल तरिकाले बोल्‍नेछु: यदि तँ मकहाँ नआई नै केही गर्न लागिरहेको छस् भने, तैँले त्यसलाई पूरा गर्न सक्छस् भन्ने कल्पना पनि नगर्नू। मलाई यस स्थितिमा आउन बाध्य गराउने तिमीहरू नै हौ।
निराश नबन्, कमजोर नबन्, अनि म तेरो लागि सबै कुरो स्पष्ट बनाउनेछु। राज्यमा पुग्‍ने मार्ग सहज छैन; कुनै पनि कुरो त्यति साधारण छैन! तिमीहरूकहाँ आशिष सहजै आएको नै तिमीहरू चाहन्छौ, होइन र? आज सबैले कठिन परीक्षाको सामना गर्नु पर्नेछ। यस्तो परीक्षाविना मेरो निम्ति तिमीहरूसँग भएको प्रेम बलियो हुन सक्दैन अनि तिमीहरूमा मेरो निम्ति साँचो प्रेम हुनेछैन। यस्ता परीक्षाहरू स-साना परिस्थितिहरूले भरिएका भए तापनि सबैले यसबाट पार भएर नै जानुपर्नेछ, केवल परीक्षाको कठिनाइ व्यक्ति अनुरूप फरक हुनेगर्छ। परीक्षाहरू मैले दिएका आशिषहरू हुन्, अनि तिमीहरूमध्ये कति जना मकहाँ बारम्बार आएर मेरो आशीर्वादको निम्ति घुँड़ा टेकेर प्रार्थना गर्छौ? मूर्ख बालकहरू! तिमीहरू सधैँ यो सोच्छौ कि केही ठूलठूला शब्दहरू मेरा आशीर्वादहरू हुन्। तरै पनि तिक्तता पनि आशीर्वादहरू हुन् भन्ने तिमीहरू जान्दैनौ। तिनीहरू, जसले मेरा तिक्तताहरू बाँड्छन्, तिनीहरूले पक्कै पनि मेरा मिठासपना पनि बाँड्नेछन्। तिमीहरूको निम्ति मेरो प्रतिज्ञा अनि आशीर्वाद यही हो। मेरा वचन खान अनि पिउन र आनन्द लिन नहिचकिचाऊ। अन्धकार बितेर गएपछि प्रकाश प्रवेश गर्नेछ। बिहान हुनभन्दा अघि पूर्ण अन्धकार हुन्छ; त्यसपछि आकाश बिस्तारै प्रकाशमय बन्दै जान्छ अनि सूर्य उदाउँछ। नडराऊ वा कमजोर नहोऊ। आज, म मेरा सन्तानलाई सहयोग गर्नेछु अनि मेरो शक्ति तिनीहरूको निम्ति प्रयोग गर्नेछु।
मण्डली विषयक कुरा उठ्दा, सधैँ आफ्नो उत्तरदायित्वलाई टाल्ने कोसिस नगर। यदि मकहाँ समस्या इमानदारी पूर्वक ल्यायौ भने, तिमीहरूले कुनै उपाय पाउनेछौ। जब यस्तो कठिन समस्या आइपर्छ, के तिमीहरू अब के गर्नु भन्ने सम्झेर डराउँछौ अनि अत्तालिन्छौ? मैले धेरै चोटि भनिसकेको छु, “मकहाँ निरन्तर आऊ!” मैले तिमीहरूलाई गर्नू भनेको कुरो के तिमीहरूले इमानदारीसाथ व्यवहारमा प्रयोग गरेका छौ? तिमीहरूले कति चोटि मेरो वचनमा मनन गरेका छौ? यदि तिमीहरूले गरेका छैनौ भने, तिमीहरूमा पक्का अन्तर्दृष्टि छैन। के यो तिमीहरूको करतुत होइन? तिमीहरू अरूलाई दोष दिन्छौ, तर किन आफैमा विद्रोह महसुस गर्दैनौ? तिमीहरू काम बिगार्छौ अनि लापरवाह र बेवास्ता रहन्छौ, तिमीहरूले मेरा वचनहरूमा ध्यान दिनै पर्छ।
आज्ञाकारी अनि नम्रले महान आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। मण्डलीमा, मप्रतिको साक्षीमा दृढ़ होऊ, सत्यलाई समर्थन गर; सही कुरो सही नै हो अनि गलत कुरो गलत नै हो। कालो अनि सेतोमा नअलमलिओ। तिमीहरू शैतानसँग लड्नु पर्नेछ अनि तिमीहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपले पराजित गर्नुपर्नेछ, ताकि त्यो फेरि कहिले पनि नउठोस्। तिमीहरूले मेरो साक्षीको सुरक्षा गर्न तिमीहरूमा भएको सबै कुरो अवश्यै दिनुपर्नेछ। यो तिमीहरूको कामको लक्ष्य हुनुपर्नेछ-यो नभुल। तर अहिले, तिमीहरू विश्‍वासमा अनि कुराहरू छुट्याउने योग्यतामा कमजोर छौ र तिमीहरू सधैँ मेरा कुराहरू र मेरा अभिप्रायहरू बुझ्न असमर्थ छौ। जे भए तापनि, व्याकुल नहोओ; मेरा पाइलाहरू अनुरूप सबै कुराहरू हुँदैजानेछन् अनि चिन्ताले केवल समस्या उत्पन्न गर्नेछ। मसँग धेरै समय बिताऊ अनि खानेकुरो र लुगाफाटोलाई महत्त्व नदेऊ, जो भौतिक शरीरको निम्ति हो। बारम्बार मेरो मनसाय खोज, अनि ती के हुन् म तिमीहरूलाई बताउनेछु। क्रमैसँग प्रत्येक कुरोमा तिमीहरूले मेरा मनसाय पाउनेछौ, ताकि प्रत्येक मानवको निम्ति, मेरो मार्ग बाधा विहीन हुनेछ। यसले मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट पार्नेछ, अनि तिमीहरूले मबाट सदा-सर्वदा आशीर्वाद प्राप्त गर्नेछौ!